गर्भवतीको पेट चि रे’र बच्चा चो’र्ने यि महिलालाई १७ वर्ष पछि दिइयो यस्तो स’जा’य - Prateek Nepal
यो घटना अमेरिकाको हो । घ’टना पछि आमाको निधन भएपनि सो बालिका भने सकुशल छन् । उनको उमेर १७ वर्ष पुगेको छ । घ’टना भएको १७ बर्ष पछि ५२ वर्षीया लिसा मोन्टगोमेरीलाई स’जा य सुनाइएको हो ।
उनलाई वि’ष को सु’ई लगाउने स’जा य सुनाइएको हो । यो घ’टना अमेरिकाको मिसौरीमा भएको थियो। लिसालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डियानाको जे’ल मा स’जा य दिइने छ ।
लिसालाई सुनाइएको स’जा यको वि’रोध भएको छ । वकिलले लिसा मानसिक रूपमा अ’स्व’स्थ रहेका कारण उनलाई यस्तो स’जा य दिन नहुने तर्क गरेका छन् । गत हप्ता लिसाका वकिलले पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग माफी मागे।
सेवा नदिइकन फर्किनु पर्यो भन्दै दुखि भए डा. केसी
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र छोरीको एक किताबले गर्यो यस्तो र’हस्य’मय खुलासा ! चौतर्फी खैलाबैला